Xog: Qorshe Turkiga loogu wareejinayo saldhiggii laga eryey Imaaraadka Carabta - Caasimada Online
Home Warar Xog: Qorshe Turkiga loogu wareejinayo saldhiggii laga eryey Imaaraadka Carabta
Xog: Qorshe Turkiga loogu wareejinayo saldhiggii laga eryey Imaaraadka Carabta
Muqdisho (Caasimada Online) – Safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Olgan Bekar, ayaa wuxuu mudooyinkii dambe uu ka waday magaaladda Muqdisho kulamo siyaasadeed, kuwaasoo uu la yeelanayey madax ka tirsan dowladda Federaalka.
Shirkii ugu dambeeyay waxa uu la yeeshay Wasiirka cusub ee Wasaaradda Gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya, Xasan Cali Maxamed, iyo Taliyaha ciidamadda xooga dalka Sareeye Gaas Cabdiwali Jaamac Xuseen [Gorod].
Illo-wareedyo la socday kulanka ayaa sheegay, in Safiirka uu kala hadlay taageeradda arrimo ku saabsan taageerada uu Turkiga siiyo ciidamada Soomaaliya iyo xaaladda Saldhiga Janaraal Gordan ee Imaaraadka uu faarujiyay.
Qoraal lasoo dhigay barta Twitter-ka ay ku leedahay Safaaradda Turkiga ayaa lagu sheegay in Xukuumadda Ankara ay joogteyn doonto taageeradda ciidan Xoogga dalka Soomaaliya, iyadoo usoo marinaysa Wasaaradda Difaaca.
Kulanka dhexmaray mas’uuliyiinta ayaa imaanayaa iyadoo dhawaan Madaxweyne Farmaajo uu booqday Saldhigii Imaaraadka maamuli jiray ee Jeneraal Gordan, halkaasoo uu tababar ugu soo xiray Askar cusub oo kusoo biiray Ciidamada.
Warar ayaa sheegaya in Wasiirka difaaca iyo Taliyaha Ciidamaada ayaa taageero maaliyadeed u raadinaya Saldhiga Gordan, kaasoo hadda lasoo warinayo inay ka jirta baahiyo badan, oo dhanka dhaqaalaha iyo agabka ah.
Turkiga wuxuu hadda gacanta ku hayaan Saldhig wayn oo uu ku leeyahay deegaanka Jazeera ee duleedka Muqdisho, kaasi oo ah midka ugu weyn ee uu dalkaasi ku leeyahay Africa.
Dowladda Soomaaliya ayaa xusul duub ugu jirtay tan iyo markii Imaaraadku baneeyey Xeradda Janaraal Gordan sidii ay u heli lahayd dowlad ka saacidda kharashaadka ku baxa Saldhigan, walina waxaa muuqata in aysan helin.